Akwụkwọ akụkọ na -ebuga gị n'oge ọzọ | Bezzia
Akwụkwọ akụkọ na -ewega gị oge ọzọ
Maria onyekwere | 14/10/2021 12:00 | Akụkọ
N'ọnwa a, anyị na -agagharị akwụkwọ akụkọ anọ ndị a na -aga n'oge ọzọ. Anyị na -eme ya site na Ndị edemede nke narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX dị ka Louisa May Alcott, Anne Brontë ma ọ bụ Flora Thompson, na Anne Hébert na ndị nwanyị na -akwado ya. Ị dịla njikere ịnụ akụkọ gị?
1 Igodo dị omimi na ihe ọ mepere
Igodo dị omimi na ihe ọ mepere
Onye edemede: Louisa May Alcott
Onye sụgharịrị ya bụ: Micaela Vázquez Lachaga
Onye nkwusa: Funambulista
Ịhụnanya yiri ka ọ na -achị n'ime ụlọ nke ndị a ma ama Richard na Alice Trevlyn, nke dị n'ime ime obodo bekee bucolic; Agbanyeghị, ọbịbịa ọbịbịa nke onye bịara abịa na okwu ole na ole gbanwere n'etiti ya na di ya, nke Alice na -anụ na nzuzo, bụ mmalite nke ọdachi enweghị ike ịkọwa nke ga -agbanwe udo nke ezinụlọ Trevlyn ruo mgbe ebighi ebi. Akụkọ ọjọọ dị a hasaa ka onye ọbịa ahụ ji bịa? Kedu ihe kpatara Alice ji daba n'ụdị adịghị ike anụ ahụ na nke uche nke na -enweghị ike ibelata ọnụnọ nwa ya Lillian? Kedu ka mpụta, afọ ole na ole gachara, nke Paul, nwa okorobịa batara na ọrụ Nwanyị Trevlyn na nwa ya nwanyị dị afọ iri na ụma, ga -enwe n'ihe a niile? Kedu ihe ga -emepe igodo dị omimi nke na -enye aha akwụkwọ akụkọ a dị mkpirikpi na -atọ ụtọ?
Jupụta na enyo na ibe ikpeazụ, Igodo dị omimi na ihe ọ mepere bụ, dị ka ekwuru na mmeghe nke Micaela Vázquez Lachaga, onye ntụgharị ọrụ, “ngwakọta nke ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga-amasị onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ nke nwere ihe omimi na akụkọ ịhụnanya nke narị afọ nke iri na itoolu, yana onye ọ bụla nwere ekele maka ọrụ edemede nke Louisa May Alcott ma chọọ ịmata akụkụ ya na -atọ ụtọ na nke na -adọrọ mmasị ”.
Onye edemede: Anne Brontë
Onye sụgharịrị ya: Menchu ​​Gutiérrez
Onye nkwusa: Alba
Ọ ga -amagbu onwe ya ma ị bụrụ onye ọchịchị! Gaa n'ụwa. Nke a bụ nrọ nke nwa nwanyị onye ụkọchukwu dị umeala n'obi, ezigbo nnwere onwe akụ na ụba na nke onwe, yana ịrara onwe ya nye ọrụ dị mma dịka agụmakwụkwọ. Otú ọ dị, ozugbo emezuru, ndị na -agụ akụkọ na nrọ a na -ekpughere onwe ha dị ka nnukwu anụ ọjọọ: ụmụaka obi ọjọọ, ụmụ agbọghọ na -akpa nkata na ụmụ agbọghọ siri ike, ndị nna na -enweghị isi, ndị nne na -eme ihe ọjọọ na ndị na -enwe afọ ojuju ... karịa ka nwa odibo.
Agnes Gray (1847), akwụkwọ akụkọ mbụ nke Anne Brontë, bụ mkpughe na -enweghị isi dabere na ahụmịhe akụkọ ndụ nke ọnọdụ dị njọ, ihe na omume, nke onye ọchịchị Victoria; ọ bụkwa akụkọ ihe mere eme nke ịhụnanya na mmechuihu dị omimi, nke nzuzo, nke "onye kachasị njọ" na "onye kachasị emerụ onwe ya" na -akwado agha dị egwu n'okpuru ihe heroine n'onwe ya kọwara dị ka "agba gbara ọchịchịrị. ụwa nke ala, ụwa nke m ”.
Onye edemede: Flora Thompson
Onye sụgharịrị ya: Pablo González-Nuevo
Onye nkwusa: Mpempe akwụkwọ Tin
"N'ehihie ọnwa Septemba na ngwụcha narị afọ nke iri na itoolu, otu nwa agbọghọ na -agafe ókèala Hampshire ka ọ na -aga Heatherley. O yi uwe ajị anụ na -acha nchara nchara na okpu ajị ajị ajị ajị ajị agba nwere obere nku nnụnụ abụọ. Ihe kachasị ọhụrụ na uwe obodo. »
Nwa agbọghọ ahụ bụ Flora Thompson, Laura na akụkọ ifo, yana obodo ọ na -aga, Grayshott, ebe Flora biri na 1898 dị ka onye njikwa post ọfịs. Onye ajọ omume Hertford, ndị were ya n'ọrụ, na -eche ya ebe ahụ; ndị ahịa a ma ama dị ka Arthur Conan Doyle ma ọ bụ Georges Bernard Shaw, ndị na -eji telegraph mpaghara eme ihe mgbe niile; ma ọ bụ Madame Lillywhite na -achụ nta ọchị ("Ụlọ ahịa okpu, ụlọ ahịa akwa, na ịgbazinye akwụkwọ"), ebe Laura nwere ike nweta akwụkwọ ọgụgụ oge ụfọdụ.
N'etiti oge ịnyịnya igwe dị umeala n'obi, foto Kodak mbụ na ihe egwu dị egwu, Heatherley bụ isi ọhụrụ na ndụ Laura dị jụụ na nnwere onwe, obere òké obodo - dị ka ndị enyi fin de siècle nke oge a na -akpọ ya - onye eke ebe obibi bụ mgbe niile oke ohia na oke ohia nke anyị zutere na nke mbụ ya dị ebube Agụmakwụkwọ Candleford.
Onye edemede: Anne Hébert
Onye sụgharịrị ya: Luisa Lucuix Venegas
Onye nkwusa: Impedimenta
Los alcatraces na -atụgharị asụsụ ahụ ụwa obi ọjọọ na mmekọ nwoke na nwoke nke obere obodo na-asụ Bekee, ife Katọlik na-asụ French gburu ya. Nrite Femina 1982, akwụkwọ akụkọ a bụ njikọta na ọdachi na -egbu egbu nke mpụ na arụrụala mara. Akwụkwọ ịkpọ òkù maka mgbagwoju anya na uri eluigwe na ala nke Hébert.
N'August 31, 1936, mmadụ abụọ nọ n'afọ iri na ụma, Olivia na Nora Atkins, ha na -apụ n'anya na Griffin Creek, obodo Canada nke ọchịchịrị yiri ka ọ na -adịgide. Enwere anyaụfụ maka ịma mma ha, ụzọ ha furu efu n'ụsọ osimiri. Ihe onyonyo nke ụmụ agbọghọ ahụ na agwakọta n'okirikiri mmiri nke ikuku, ikuku na -aghakwa ọnọdụ ihu igwe na -adịghị mma, nke zuru oke maka elu elu, nke akara nke amachibidoro na nke ọjọọ. N'oge na -adịghị anya, a na -achịpụ na ọnụnọ ya bụ ihe ndapụta: ọghọm anọwo na -eche kemgbe. Site n'olu ndị odide ahụ, yana akwụkwọ ozi ụfọdụ, anyị na -ahụ usoro a na -agaghị akwụsị akwụsị nke oke mbibi ahụ na -akpasu obodo iwe nke ukwuu, na -ajụ oyi na ọdịnala yana n'okpukpe okpukpe ka njọ. Ma ọ bụ na akara aka nke obere obodo Quebec yiri ka ọ na -edozikwa atụmatụ Chineke.
Kedu n'ime akwụkwọ akụkọ edemede ndị a nke kachasị amasị gị ịgụ? Ọ na -eme gị dị ka m na ịchọrọ ha niile? Cheta na kwa ọnwa na Bezzia anyị na -eso gị ekerịta akụkọ gbasara akwụkwọ na ọnwa gara aga anyị nyefere ya ọrụ ndị na -ekwu maka owu ọmụma. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na isiokwu ahụ, lelee ha!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Akwụkwọ akụkọ na -ewega gị oge ọzọ
Otu esi achọ mma na vases
Otu esi eme akwa isi maka akwa